Obama: Trump ha xoojiyo midnimada - BBC News Somali
Image caption Madaxweynaha Maraykanka Obama
Madaxweyne Barack Obama ayaa ugu baaqay ninka xilka kala wareegi doona ee Donald Trump in uu midnada booriyo, ka dib ballanqaadyadii adkaa ee uu sameeyay markii uu socday ololaha doorashada.
Ka dib hadalo adag oo uu ku weerarray Donald Trump intii uu socday ololaha doorashada, gaar ahaan midkii uu ku tilmaamay in Trump aanu Maraykanka hogaamin karin, ayaa madaxweyne Obama waxa uu sheegay in dalkiisa uu go'aan gaaray, markanna loo baahan yahay in la taageero madaxweynaha la doortay.
Asaga oo weriyayaasha kula hadlayay Aqalka Cad, ka hor inta aanu u bixin safarkiisii ugu dambeeyay ee dibedda, ayaa Mr Obama waxa uu qiray in uu walaac ka qabo in meesha ay ka baxaan guulihii uu gaaray qaar ka mid ah, sida barnaamijka caafimaadka ay dadku awoodi karaan ee Obamacare.
Madaxweyne Obama oo sheegay in Trump aanu xiriirka u jari doonin gaashaanbuurta NATO iyo weliba Midowga Yurub, asagoo hoosta ka xariiqay muhiimadda ay Yurub iyo gaashaanbuurtaasiba u leeyihiin ammaanka dunida.
Mr Obama ayaa sheegay in Maraykanka uu ku qasban yahay in uu sii ahaado tiir awoodeed iyo meel ay dadka rajadooda ka eegtaan caalamka oo dhan.
Waxa uu ugu baaqay madaxweynaha la doortay in uu la hadlo dadyowga laga tirada badan yahay, ka dib ololihii doorasho ee dalka kala qeybiyay.